लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतासँग दिनरात निकट रहेर सरकारका गतिविधिलाई निगरानी गरिरहनुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हुन्छ। दर्बिलो प्रतिपक्षबिनाको सरकार जति बेला पनि स्वेच्छाचारी हुनसक्ने भएकाले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अक्सिजनसरह मानिन्छ।
स्पष्ट बहुमतसहितको दर्बिलो सरकार गठन भएकाले यो बेला प्रतिपक्षमा रहने दलले पनि आफूलाई संसद्मा कसरी सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने भनेर तयारी गर्नुपर्ने स्थिति छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ जनमत भएको सरकार ((मधेशकेन्द्रित दल सरकारमा सहभागी भएमा) का गतिविधिलाई निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्ने स्थिति छ।
सरकार गठन भइसकेको र केही दिनमा मन्त्री परिषद् विस्तार पनि सकिने तथा संसद् बैठक पनि सुरु हुने भएकाले नेपाली कांग्रेसले यतिबेला आफूलाई प्रतिपक्ष दलका रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्ने ? भनेर ‘होमवर्क' गर्ने बेला हो। तर, कांग्रेसका नेताहरू अहिले एकापसमा संसदीय दलको नेता को हुने ? निर्वाचनमा पराजयको अपजस कसले लिने, कसले नलिने ? आफ्नो गुटका नेताको कसरी बचाउ गर्ने ? भनेर गाँड कोराकोर गरेर दिन कटाइरहेका छन्।
निर्वाचनमा पराजित भएपछि कांग्रेस अझै बढी छिरल्लिएको छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जेजस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर नेतृत्वमा पुगेका थिए, ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएका कारण पनि कांग्रेस भताभुंग भएको हो। पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार चलाउने प्रण गर्दै सभापति निर्वाचित भएका देउवाले दुई महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने काम दुई वर्ष बितिसक्दा पनि गरेका छैनन्। सभापतिले मनोनयन गर्नुपर्ने पार्टी पदाधिकारी मनोनीत हुन सकेका छैनन्।
विधानअनुसार गठन हुनुपर्ने पार्टीका विभागहरू गठन भएका छैनन्। आफूलाई साथ दिँदै र सहयोग गर्दै आएका नेताहरूलाई पाखा लगाएर देउवाले आफूलाई नै कमजोर बनाएका छन्। जो पार्टीका लागि खट्न सक्छन्, पार्टीले गरेका राम्रा कामबारे जनतालाई बुझाउन सक्छन्, उनीहरूलाई कुनै भूमिका नदिई अलपत्र छोडेर लहडमा पार्टी चलाएकै कारण कांग्रेस खुम्चिन पुगेको तथ्य सबैले बुझेकै छन्।
कांग्रेसले आफूलाई ‘रिभाइभ’ गर्न जनतासँग जोडिनुको विकल्प छैन। कांग्रेसका केही युवा नेताले पार्टीका लागि जागरण अभियान सञ्चालन गरेको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता जागरण अभियान पनि भिन्नाभिन्नै ठाउँमा गुटगत रूपमा भइरहेको छ। कांग्रेसका युवा नेताले गुट र उपगुटमा विभाजित भएर जागरण अभियान सञ्चालन गरेर पार्टीलाई सशक्त बनाउन सकिँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका अनुहार देखाएर आफूले एक जना पनि नयाँ कांग्रेस कार्यकर्ता बनाउन नसक्ने भन्दै निराशा व्यक्त गरिररहेका छन्।
हालसालै प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका अर्का युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा भने कांग्रेसलाई पुनरुत्थान गर्न सकिने अठोटका साथ प्रस्तुत भइरहेका छन्। महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको सभापतिसहितको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अहिले नै विस्थापन गरेर अघि बढ्नसक्ने स्थिति छैन। कांग्रेसभित्र चामत्कारिक ‘लिडरसिप’ रातारात देखिने सम्भावना पनि देखिँदैन। त्यसैले पार्टीलाई यो बेला तानातान गरेर थप क्षतिग्रस्त बनाउनेभन्दा पनि विधानमा उल्लेख गरिएअनुसार पदाधिकारी तथा विभाग गठन गरेर कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर र सोहीअनुसार काम गरे भने कांग्रेस पुनर्जागृत हुनसक्छ।
कांग्रेसको पुनरुत्थान उसका लागि जति महत्वपूर्ण छ, सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न पनि जरुरी छ। आन्तरिक किचलोमा परेर कांग्रेस अल्झिरहने हो भने सरकारले गर्ने गल्तीमा औँला उठाउने शक्तिको अभाव खट्किनेछ। कांग्रेसले छाया सरकार बनाएर सरकारका गतिविधिलाई निगरानी गर्ने बताएको छ।
यो सकारात्मक काम हो। तर, भन्नका लागि भन्ने र प्रचारका लागि मात्र संयन्त्र बनाएर प्रतिपक्ष दल पानीमाथिको ओभानो बन्ने अवस्था बन्यो भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कार बलियो हुँदैन। अहिले जुट्ने निर्णय गरेका एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि कुन बेला फुट्छन् र त्यसपछि आफ्नो पालो स्वतः आइहाल्छ भनेर ढुकेर बस्ने गल्ती कांग्रेसले गरेन भने उसको पुनरुत्थान हुन बेर लाग्दैन।
कांग्रेसले यस पटक दर्बिलो प्रतिपक्ष, जसले सरकारका कामको निगरानी र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहने भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्यो भने ऊ जनताको नजरमा फेरि पनि पर्नेछ। निर्वाचन हारेको पीडाको समीक्षा गरेर मात्रै सुस्ताइरह्यो भने कांग्रेस त झनै कमजोर हुन्छ नै, यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि बाधा पु¥याउनेछ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने मानक स्थापित गर्ने अवसरबाट कांग्रेस चुकेन भने त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न मद्दत पुग्नेछ।